Sabti, Bisha Afraad 30, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 23:39
Faaqidaadda: Khilaafka Xisbiga Kulmiye
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaan ku eegeynaa Khilaafaadka ka dhex aloosan xubnaha Xisbiga Kulmiye iyo saameynta uu ku yeelan karo xisbigaasi arrimahaasi. Waxa soo diyaarisay soona jeedineysa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka Sahra Ciidle Nuur oo Washington Joogta.
Bar. Faaqidaadda: Muranada SiyaasadeedBarnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay murannada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, oo dowlado badan oo dalka Soomaaliya soo maray la degay.
Faaqidaadda: Tayada Waxbarashada S/LandLaanta af Somaliga ee Idaacada VOA ayaa toddobaadkan magaalada Hargeysa ku qabatay kulan aqooneed lagu falanqeeyey ahmiyada tayada waxbarashada Somaliland, halkaas oo ay isugu yimaadeen masuuliyiin iyo aqoonyahano door ah oo ku faaqiday mawduucan.
Faaqidaadda: Guulaha & Guuldarooyinka QMGuulaha iyo guul darrooyinka ay la kulantay hay'ada Qarramada Midoobey toddobaatankii sano ee la soo dhaafay. Barnaamijka waxa ka qeyb galaya aqoonyahanno kala gaddisan oo faaqidaya arrimahan.
Faaqidaad: Adeegsiga Suugaanta Xilliyada ColaadahaBarnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxan diirradda ku saaraynaa soo jiritaanka adeegsiga suugaanta xilliyada colaadaha iyo nabadda ee Soomaaliya.
Faaqidaadda: Shirka Xallinta Xurgufta Maamullada Bar.Faaqidaadda Toddobaadka
Faaqidaadda: Sharciyadda MooshinkaBarnaamijka Faaqidaadda Todobaadka, waxa uu ku saabsanyahay dood ku saabsan in Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha Soomaaliya uu waafaqsanyahay Dastuurka iyo in kale.
Faaqidaadda: Mooshinka iyo Baaqa CaalamkaBarnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay baarlamanka Soomaaliya oo saddex sano ay u buuxsantay iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka.
Faaqidaadda: Mooshinka ka dhanka ah MadaxweynahaBarnaamijka Faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay sharci ahaanshaha mooshinka ay xildhibaannada Soomaaliya ka gudbiyeen madaxweyne Xasan Sheekh.
Faaqidaada Toddobaadka: Baadhitaanka SOMA OILBarnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaa ku saabsan baadhitaanka la xidhiidha shirkadda SOMA OIL ee heshiiska sahanka ah la gashay dawladda Somalia.
Faaqidaadda iyo Booqashada Obama ee Bariga AfrikaBarnaamijka Faaqidaadda Todobaadka waxa uu ku saabsanyahay Booqashada Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ee waddamada Kenya iyo Ethiopia.
Faaqidaada: Muranka BaddaKu soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya.
Faaqidaadda: Xaaladda Siyaasadda iyo Amniga SomaliaBarnaamijku wuxuu ka hadlayaa qaabka ay doorasho uga dhici karto Somalia, dhaqaale la’aanta haysata dowladda, guldarada AMISOM ka soo gaartay dagaalkii Leego, iyo waxa laga filan karo doorashada madaxtinimada Maamulka Galmudug.
Faaqidaada: 55 Sano ka dib Xorriyaddii SoomaaliyaKu soo dhowaada Barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo ku saabsan 55 sano ka dib markii Gobollada Woqooyi ee Soomaaliya ay xornimada ka heleen gumaystaha.
Faaqidaadda: Wanaagga Bisha RamadanBarnaamijka maanta waxa marti ku ah Sheekh Maxamed Cabdi Daahir oo London ku sugan, Sheekh Cabdiraxmaan Sh. Muxiyadiin Celi oo ku sugan dalka Sweden, iyo Cabditawaab Sheekh Axmed oo ku sugan magaalada Riyad ee dalka Sacuudiga
Faaqidadda iyo Gaabiska Hawlaha GurmadkaBarnaamijka Faaqidaaddu wuxuu ku saabsan yahay hawlan gurmadka ee lagu gar-gaarayo qaxootiga Yeme ka imanaya iyo walida dadba baahan. Tujaarta ayaa la sheegayaa inay ka gaabinayaan gurmadka iyo inay sadaqo la baxaan.
Faaqidaadda: Dagaalada Xadka EthiopiaBarnaamijka Faaqidaadda toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay dagaalada iyo xiisadaha ka taagan deegaanada ku teedsan xuduudda gobolada dhexe ee Somalia iyo Ethiopia.
Faaqidaada: Mooshinka ka Dhanka ah JubbalandBarnaamijka Faaqidaada Toddobaadka waxaynu ku eegi doonnaa mooshinka ka dhanka ah maamulka Jubba, kaas oo qaar ka mida mudanayasha Baarlamaanka Somalia ay horgeeyey golaha shacabka.
Bar. Faaqidaadda: Dib u Dhiska CiidamadaBarnaamijka Faaqidaaddu todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay Sida ugu haboon ee Soomaaliya u yeelan karto Ciidan Qaran.